फेसबुकमा तस्बिर हाल्ने वित्तिकै अपशब्द लेख्नेलाई प्रियंकाको यस्तो जवाफ « Mazzako Online
फेसबुकमा तस्बिर हाल्ने वित्तिकै अपशब्द लेख्नेलाई प्रियंकाको यस्तो जवाफ
कहिलेकाही फेसबुकमा फ्यान संख्या बढेर पनि कलाकारलाई घाटा लाग्छ । लाइक पेजमा लाइक बढेकोमा फ्यान धेरै भए भनेर मख्ख हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । अहिले अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको हकमा पनि यस्तै भएको छ । उनको फेसबुक लाइक पेजमा आउने जथाभावी कमेन्टले उनको मन रोएको छ ।
आइतबार बेलुकी फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले आफूलाई तस्बिर हाल्ने वित्तिकै ‘भालु, रन्डी’ जस्ता कमेन्ट गर्नेलाई जवाफ दिइन् । उनले आफूहरु पनि मानिस भएको भन्दै यस्ता कुराले मन दुख्ने र रुन आउने लेखिन् ।
आफ्नी आमाले तस्बिर हेरेर फोन गर्दै तिम्रो तस्बिरमा के के कमेन्ट आएको छ, हटाइहाल भन्दा आफूलाई र आफ्नी आमालाई कस्तो हुन्छ होला भन्दै प्रियंकाले प्रश्न पनि गरेकी छिन् । उनले यस्तो कमेन्ट गर्नेको घरमा आमा, दिदी, बहिनी छैनन् भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । आफूलाई बरु ब्लक गर्न आग्रह गर्दै उनले यस्ता भद्दा कमेन्ट नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले आफ्नो मन रुवाउनेहरुलाई भन्दै लामो पत्र फेसबुकमा लेखेकी हुन् ।
मेरो मनलाई रुवाउनेहरुका लागि –
जब जब म नया फोटो हाल्छु, कुनै नया फिल्मको गीत या म्युजिक भिडियो शेर गर्छु, किन यति धेरै गाली गर्नु हुन्छ मलाइ? के मैले कुनै प्रकरको चोट पुराए? तपाइलाइ ब्यक्तिगत रूपमा ठेस पुराए?? ‘रन्डी’, ‘भालु’, ‘बेशिया’…. येस्ता शव्दहरु प्रयोग गरेर बडा आनन्द महसुस हुन्छ हो? एक्दम महान काम गरे झै लाग्छ हो?
हामी कलाकर दिन रात मेहेनत गर्छौ। घरी फिलिम शुटिङ, घरी कार्यक्रम। दशै, तिहार, चाड पर्व केही न सोची यहाँहरुलाइ मनोरंजन दिन घरी कतार, घरी मलेसिया त घरी अस्ट्रेलिया पुग्छौ। के को लागि? येहि आलोचना खप्नको लागि? कति चित्त दुख्छ होला सोच्नुस।
यहाँहरुको घरमा छोरी-चेली छैनन? एक पटक सोच्नुस त, तपाइको घरको दिदी-बहिनी, आमा, भाउजू, छोरी हरु माथी येस्तो शब्द कसैले प्रयोग गर्दा, तपाइलाइ कस्तो महसुस हुन्थ्यो?? ठिक त्येस्तै महसुस हुदो होला नि मेरा बुबा, आमा, भाइ र अन्य परिवारका सदस्यहरुलाइ। कहिले काहीँ मामुले फोन गरेर ‘छोरी कस्तो नराम्रो लेखेछ तिम्रो फोटोमा हेर त। छिटो डिलिट गर’ भन्नूहुन्छ। कति चित्त दुख्छ होला वहाँको।